ဦးကျော်ရဲ့ Notes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဦးကျော်ရဲ့ Notes
အောက်ကစာတွေက ..ဆန်ဖရန်စစ္စကို တက်ခ်စီတွေ ပိုင်ရှင်ဘဝကနေ ရန်ကုန်မှာ ကားသွားမောင်းနေတဲ့ ဦးကျော်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲက နုတ်တွေပါ…။
ကြည့်ကြပါဗျာ. မြိ ု့တော်ကစီစဉ်ထားသောလူကူးတံတားတွေကိုအတက်အဆင်းအဆင်ပြေအောင်မ
လုပ်ခြင်းဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုနင့် wheelchair သူတွေပါမသုံးနိင်ကြပါ။
အချိန်မှီရင်ရပ်တန် ့ပြ ုပြင်ပုံစံများကိုပြောင်းစေချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို ့မြန်မာများသည်ခွေးငယ် ကြောင်ငယ်များကိုချစ်တတ်လာသောေြကာင့်အိမ်တွင်
ကောင်းသောကြင်နာမူတွေပါ သို ့ပေမဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တာတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်။
US နှင့် အခြားနိုင်ငံကြီးများတွင်မိမိအိမ်မွေးခွေးတွေရဲ ့အညစ်အကြေးမှန်သမျှကိုမိမိကိုယ်တိုင်
ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ဖြင့်ပြန်းသိမ်းယူပြီးအမိူက်ပုံးထဲသို ့စွန် ့ပစ်ခြင်းကိုပြ ုလုပ်ကြပါသည်။
မပြ ုလုပ်ဘဲဒီအတိုင်းထားခဲ့ပါက ပြည်သူ ့ရဲကဒဏ်ကြေးအနေဖြင့် USD$(30) ဒဏ်ရိုက်ခြင်းဖြင့်
ပန်းခြံ လမ်းမပေါ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် တပါးသူအားမညစ်ပတ်စေဘဲ
US ဦးကျော် (ကလောင်)
ကျွန်တော်တို ့မြန်မာနိင်ငံတွင် မြန်မာဘီယာ ကြော်ငြာ ဝိစကီကြော်ငြာကားလမ်း ရထားလမ်း
ရေလမ်းအဆုံးနေရာအနှံ ့အားကောင်းစွာဖြင့်ကြော်ငြာထားကဲ့သို ့ဘီယာဆိုင် KTV ဆိုင် စားသောက်
ကွာခြားမူရှိတာကကျွန်တော် USမှာဘီယာ ဝိစကီများကိုအများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာသောက်ခြင်း
ရောင်းခြင်းများလုံဝ လုံဝခွင် ့မပြ ုပါ သောက်သောသူအားတခြားလူမမြင်အောင်ဆိုင်အတွင်းကာရံပြီး
ရောင်းခွင့်ပြ ုကြခြင်းဖြစ် အတုမြင်အတက်သင်များကိုထိန်းထားြကပါတယ်
21 ပြည့်သောအရွယ်ရောက်သူများဖြစ်မြဖစ် မှတ်ပုံတင်(I D)စစ်ကာဆိုင်အတွင်းပေးဝင်သုံးဆွဲခွင့်ပြ ုကြပါသည်
တို ့နိင်ငံမှာလေကော်ဖီဆိုင် ဘီယာဆိုင် KTVဆိုင် ဖုန်းဆိုင်များကပ်ကာရောင်းချနြေခင်းသည်အောင်မြင်
မြိ ု့လယ်ကတရုတ်တန်း (၁၉)လမ်းတွင်လူမြင်ကွင်းသောက်ေနကြတာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်မိန်းခေလးငယ်များ
အတုမြင်အတက်သင်ဆောင်ပုဒ်လေးအားသတိပြ ုခြင်းဖြင့်ယမကာဘဝမှကင်းေဝးနိင်ပါစေလို ့ဆုတောင်းရင်း
သဘာဝဓါတ်ငွေ့CNG ပြန်ပြင်သင့်ေသာကားငယ်များ
1.3 /1.5 အင်ဂျင်ပါသောကါးငယ်များအား ဓါတ်ဆီ (သို ့)ဒီဇယ်သုံးပါကအသုံးခံနိုင်သောကားများဟုသတ်မှတ်
ပြီး ဆီမစားသောကားများလို ့ခေါ်နိုင်ပါသည် ဤကားများကို CNG ပေးသုံးခြင်းဖြင့်ပြည်ပမှမှာယူေသာဓါတ်
2.0 အထက်အင်ဂျင်ပါသောကားများကို CNG သုံးစွဲခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအတွက်ဓါတ်ဆီချွေတာခြင်းကိုသက်ရောက်
နိုင်ပါသည် အမေရိကန်သမ္မတကိုယ်တိုင် မိမိနိုင်ငံတွင်ဆီအသုံးများသောကားများကို ကားသစ်နှင့်လဲလှယ်ပါက
ဒေါ်လာ. $4500 အစိုးရကစိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆီအသုံးများသောကားများကိုလမ်းမထက်ကဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်
2.0အထက်အင်ဂျင်ပါသောကားများအတွက်သာ CNG ပေးခြင်းဖြင့် ဈေးနူန်းမပြောင်းရဘဲ နိုင်ငံအတွက်သက်သာစေနိုင်မည်
ကျွန်တော်တို ့အမေရိကန်နှိင်ငံမှာမြိ ု့ကြီး မြိ ု့လေးနေရာအနှံ လမ်းဆုံ လမ်းခွ မီးပွိင့်မထားနှိင်သောနေရာများမှာ (STOP) ဆိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားကြပါတယ်
အမေရိကန်လိုင်စင်ရုံးက (DMV) က STOP ဆိုင်းကိုအဓိကထားပြီးသင်ပေးကြ ဖြေဆိုကြရပါတယ်
(STOP) ဆိုင်းကိုတွေ ့ပါက (1) ကားလေးဘီးစလုံးရပ်ပါ
(2)အရင်ရောက် အရင်ထွက်စနစ်ဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပေးအယူလုပ်ရမည်
သို ့ပေမဲ့မိမိထွက်မည့်နေရာ (ဥပမာ) လမ်းဆုံတွင်ဝင်လို ့မရရင်ခဏစောင့်ဆိုင်းပြီးမှထွက်ပါ ၎င်းနည်းဖြင့်
လမ်းဆုံလမ်းခွခေါင်းချင်းဆိုင်ပိတ်ဆို ့မူများပပျောက်စေနှိင်မည် မီးပွိင့်ပျက်သော်လည်း (STOP)ဆိုင်း အသိစိတ်ထားကာပြ ုမူကြပါ
လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ပိတ်ဆို ့နေပါကအပြစ်ရှိသည်ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲကယူဆကာ ချလံဖြတ်အရေးယူ
ခြင်းခံရပါမည် DON’T BIOCK INTERSECTION ဥပဒေ
(STOP) ကိုမရပ်ခဲ့ နားလည်မူမရှိခဲ့ရင် မီးနီဖြတ်ခြင်းဥပဒေနှင့် နိူင်းယှဉ်သတ်မှတ်သည် (DRIVER) အား
ဒဏ်ကြေးနှင့် (3) နှစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရမည်
ကားတိုင်းတွင် INSURANCE CO. ရှိရမည် မူခင်းများသော (DRIVER) အား မည်သည့်
INSURANCE CO. မှတာဝန်ယူခြင်းမရှိပါ နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်ရမည့်ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရပါမည်
မြန်မာတနိင်ငံလုံး (STOP) ဆိုင်းလေးကိုသုံးနှိင်ပါစေလို ့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါ လေးနဲ ့မြန်မြန်တိုင်းပေးကျပါ ( BUS &TAXI )
အမေရိကန် ပြည်သူ ့ရဲ အါးလုံးက ကားဖြင့်စီးပွားရှာသောကားများကုိ အမြဲ တာယာတွေကိုစစ်ဆေးကြပါတယ်
စိတ်ချမူမရသောတာယာများတွေ ့ပါက ချက်ခြင်းပြေးဆွဲမူကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ပြင်ဆင်ခွင် ့စါကိုထုတ်ပေးပြီ တပတ်အတွင်းပြ ုပြင်ခြင်းမရှိပါက တရားရှံးတင်ကာ ဒဏ်ကြေးနင့်လုပ်ငန်းပိတ် ခံရပါတယ်
တပတ်အတွင်းပြင်ဆင်ပြီးပါက မည်သည်ရဲအရာရှိ ကိုပြခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်စါ ပယ်ဖြတ်နိင်ပြီးတရားရှံးကိုသွားစရာမလိုတော့ပါ
မပြန်လမ်း မဖြင့်အောင် အမြန်ဆုံးတိုင်းပေးကြပါ လိုင်စင် စစ်တါနဲ ့မလုံလောက်ပါ
အဝေပြေး ခရီးသယ်တင်ကားများ တာ ယာ နင့် မှန်ကွဲတူ တွေအရေးကြီးဆုံးပါဗျာ
ကျွန်တော် အမေရိကန်ကမြိ ု့တွေမှာ ကားတွေကို (၇၂)နာရီကျော်ပါက ဆွဲကါးနဲ ့တခါတည်းသယ်
ယူသွားပြီ ရဲ ဝင်း ထဲ ့ကာ ဒါဏ်ကြေး/သိမ်း ပြ ုလုပ်ကြပါတယ် မြိ ု့ကိုညစ်ပတ်မခံပါ
မြန်မာပြည်မှာတော့ ကြိုက်သလိုရပ် အိမ်ရှေ့မှာတုံး တါယါ ခုံးခဲလုံး တွေနေရာယူတာကတမျိုးဘယ်နိုင်
ငံမှမရှိတဲ့ ညစ်ပတ် စိတ်တွေပေါ့ ဒါတွေကိုမြင်တော့မြို ့တော်ကိုလှအောင်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်တယ် နားထောင်ပြီး မျှော်နေကြတယ် မချပေးဘူး သူလဲမလုပ်နှိင်ဒါနဲ ့ဘဲငါ့အိမ်ရှေ့
ငါသဘေါပါ ကျွန်တော် တို့ ့လုပ် ခွင့်ပေးပါကမြိ ု့နယ် တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရကြမှာပါ
လှလှပပ ကိုယ်မြိ ု့နယ် ပြ ုပြင်နှိင်မှာပါ နောက်နည်းတွေရှိပါတယ် ငွေကောက်ခံလူမပါ အကြွေးမပါကောက်ခံ
နည်းတွေရှိပါတယ် သို ့သော်လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘယ်မှာလဲ ? နားလည်သူတွေမလိုယင် သမ္မတ ကဘါလို ့ဖိတ်ခဲ့ လါခဲ့
တဖွဖွပြောနေတါကတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်. လုပ်ပေးဘို ့(၂၄)နာရီအဆင်သင် ့ခုတော့ ၅ နာရီ ကျော်ယာဉ်ထိန်း
မရှိ. ဒါတွေကိုကါပြီး လုပ်ပေးခြင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို ့US ကဆန်ဖရမ်စစ်စကိုမြိုလူဦးရေနဲ ့ရန်ကုန်လူဦးရေအတူတူပေါ့
တမြိ ု့လုံးမှာTAXI ကို ၃၀၀ဝ လောက်ဘဲထါးပြီ ထပ်မလုပ်ဘို ့ပိတ်ထားခဲံပါတယ်
အခုတော့ရန်ကုန်မှာ taxi စီးရေ ၆၀၀၀ဝ (ခြောက်သောင်း)အဆများစွာကွာခြားပါတယ် ယာဉ် ပိတ်ဆို ့မူတစိတ်တပိုင်း TAXI ကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတင်ြပယင်နောက်ထပ် taxi လုပ်ခွင့်ပိတ်သင့်ပါပြီ
အကွာအဝေး သတ်မှတ်ပြီးစီးပွားတူများလုပ်ခွင့်မပြ ုခြင်းဖြင့်အတွေးသစ်များနင့်စီးပွားရေးကိုတမူထူးစေပါတယ်
လက်ဘရည်ဆိုင် ဘီယာဆိုင် ထမင်းဆိုင် KTV ဆိုင် တိုးတက်မူကိုရည်စူးပြီးတင်ပြလိုက်ပါပြီ
ဒီမှာတော့ ခွေးမွေးပြီး ခွေးကျောင်းတဲ့သူက
ခွေးအင်အင်းကျုံးဖို့ တန်ဆာပလာနဲ့ ခွေးကျောင်း ထွက်ရတာပဲ။
မွသဲလာမှ သူ့ ကားတာယာ အကြောင်း ပြောပြလိမ့်မယ်။
ခက်တာက အိုဗာစီးက လူ က
အမြင်မတော်တာ မကောင်းတာ ပြောရင်ကို ….
လူတောက်ညင်ကပ်ခံရတာက အရင် (ကြီးကျယ်တယ်၊ နှိုင်းတယ် ဆိုပြီး)
လုံးဝ ပြင်ဖို့ မရှိတာက နောက်။
ဒီလူကြီး ပြောသွားတာတွေ အဟုတ်ပဲ …
မြန်မာပြည် လူအများစုကလည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်စေချင်ကြမှာပါပဲ …
ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်အရ …
ဆင့်ကဲ .. ဆင့်ကဲ ဖြစ်သွားရင်းနဲ့ပဲ …
အခုလိုတွေ ဖြစ်နေကြတယ် ထင်ပါတယ် ….
ကျော့်အနေနဲ့ ပြောရရင် …
ကျော်က လမ်းမပေါ်မှာ ကားလည်း မောင်းတယ်
လမ်းလည်း လျှောက်သွားတယ် …
ကားနဲ့ မောင်းသွားတော့ …
စက်ဘီးတွေ၊ လူတွေ စည်းကမ်းမရှိကြဘူးလို့ မှတ်ချက်ပြုလိုက်တယ် …
စက်ဘီး နင်းပြီး သွားတော့ ..
လူတွေ ကားတွေက စည်းကမ်း မရှိကြဘူးလို့ မှတ်ချက်ပြုလိုက်ပြန်တယ် …
အဲ .. လမ်းလျှောက်သွားပြန်တော့ …
စက်ဘီးတွေ ကားတွေက စည်းကမ်းကို မရှိဘူးလို့ ပြောထွက်မိပြန်သေးတော့တယ် …
အထက်က အစ .. အောက်အဆုံး …
အားလုံး စည်းကမ်း မရှိလို့ အခုလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နေကြတာပါပဲရယ် ….
စည်းကမ်း ရှိချင်ပေမယ့်လည်း မိုးခါးရေ ရောသောက်လိုက်ကြတာမျိုးတွေလည်း ပါသပေါ့ဗျာ …
အထက်က အစ .. အောက်အဆုံး … (တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတွေးမိဒယ်)
———— တော်လိုက်တဲ့ တုံးတုံး နီပြောဒါအမှန်ဘဲ
အီးကားတာယာကတော့လဲဖို့ဟာ ပန်းကျန်သေးလို့မလဲမိသေးတာ။ဂျိုင့်တွေကျင်းတွေနဲ့မို့ မိုးကုန်မှလဲမယ်တွေးထားတာ။ လမ်းကောင်းပြန်တော့လဲကွန်ကရစ်နဲ့ လမ်းမကောင်းဘူးဆိုတော့လဲ လဂဘာအလား ကလေးကို တနေ့နှစ်ကြိမ်ကျောင်းပို့ကြိုရတဲ့လမ်းက ရထားလမ်းကိုဖြတ်ရတယ်။ တနေ့လောက်မှအိုက်လမ်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်တင်ပေးအုံးမယ်။ သူ့ထက်ဆိုးတဲ့လမ်းတောင်သူ့လောက်ဆိုးမယ်မထင်။ ကားတာယာကော အောက်ပိုင်းကောတအားနာနာ။ :byee:
“ကျွန်တော် အမေရိကန်ကမြိ ု့တွေမှာ ကားတွေကို (၇၂)နာရီကျော်ပါက ဆွဲကါးနဲ ့တခါတည်းသယ်”
မြန်​မာကလူ​တွေပဲ ​ခေါ်သလားမှတ်​တာ သူကြီးတို့ ဆီကပြန်​လာတဲ့သူ​တွေလည်​း အဲ့လို​ပြောတယ်​ဆို​တော့ အ​ဖော်​ရသွားတာ​ပေါ့။ အ​မေရိကန်​ကမြို့….:-D
စာရေးဆရာမဟုတ် လိုအပ်တာတွေ ပြင်ပေးပါဆိုလို့
ပထမဆုံးပြင်ရမှာ ကတော့ ကမာ္ဘအေးလမ်းမကြီး လူကူးတံတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကမ်းနားလမ်းက ပန်းဆိုးတန်းထိပ် လူကူးတံတားပါ ။
နောက်ပြည်လမ်း အေဒီလမ်းမှာ လူကူးတံတား မရှိပါ ။
မြန်မာပြည် လက်ချိူ းရီလို့ ရတဲ့ မဆလ ခောတ်လူကူးတံတားက ရွေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်က
(၁) သိမ်ကြီးဈေး ဟိုဘက် ဒီဘက်ထိပ် လူကူးတံတား နှစ်စီး
(၂) ဆူးလေ ဘုရား က လူကူးတံတား
(၃)ဗိုလ်ချူ ပ်ဈေး ရှေ့ က လူကူးတံတား
ဒါဘဲ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။
အခု နောက်ပိုင်း ဆူးလေဘုရား လမ်း ကို အနော်ရထာလမ်း မီးပွိ ုင့် နားဖြတ်တဲ့ တံတား
နဲ့ ပြည်လမ်း ခရေပင်လမ်းခွဲနား အောင်ဆန်းသူရိယ ကျောင်း နားက လူကူးတံတား
အခု ပုံမှာ ပြနေတဲ့ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကမ်းနားလမ်း လူကူး တံတား
ဒါဘဲ ရှိတယ် ထင်တယ် ။
ဒါတွေ ပြောရင် ဒေါတွေပါ ပါတယ်လေ… ပြည်ပရောက် လူတွေအမြင် မပြောနဲ့ ပြည်တွင်းနေသူများရဲ့ အမြင်တောင် ခုထိ ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
အော်ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောကုန်နိုင်မယ်မထင်… ခင်ဗျားတို.ပြောတိုင်း လိုက်ပြင်နေဖို.
ဘက်ဂျက်လိုဒယ်ဗျ.. ဘက်ဂျက်… ဟွင်းဟွင်း…
ဘယ်နှယ့် လုံလုံလောက်လောက် မှ ချမပေးတာ.. ဘာမှလုပ်လို.မရဘူး… အဲဒါနဲ.ပဲ မလုံမလောက်နဲ.ဆိုတော့.. အာဟိ..
သားကတော့ ဒီလိုပဲ ကော်စားပလိုက်တာပဲ……
အယ်ခွေးချေးပုုံ ဒီအတုိုင်းကော်စားလုိုက်တယ် အံ့ရောအံ့ရော
အော့ အာ လုပ်ပြီး ကို ချိုကြီးကတော့… တားကျောဒါအဲဒီအပုံကြီးဟုတ်ဘူးဂျ ဟို အပုံဟိုအပုံ..
တချိန်လုံးအနောက်နဲ့တူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဟေ့….. မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ပဲ ခရီးသွားနေရတာ အခုဆို လူဦးရေ သန်း ၅ဝ လိုလို၊ သန်း ၆ဝ လိုလို၊ သန်း၇ဝ လိုလို၊ လိုလို ပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်းနှီးနေခဲ့ရတော့ အသားကျနေပါပြီ…… idea ရှိပေမယ့် budget မရှိတော့လဲ အနောက်ကိုမမှီသေးဘူးပေါ့။ budget ရှိပြန်တော့လဲ စားဝတ်နေရေးအတွက် ခိုးရ၊ ဝှက်ရ၊ ခိုးလို့၊ ဝှက်လို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြည့်စုံပြန်တော့လဲ လူလောဘလေ အတောကိုမသတ်နိုင်တော့ သံသရာလည်နေတာပေါ့……
ကိုယ်မွေးထားတဲ့ခွေးရဲ့ ခွေးချီး.. ကိုယ်ကျုံးပေးရတာ ဘက်ဂျက်မလိုပါဘူး..။
အရက်ကို လူမြင်ကွင်းမသောက်ခိုင်းတာလည်း.. ဘက်ဂျက်မလို..
တာယာတိုင်းတာကလည်း ဘက်ဂျက်မလိုရေးချ. မလို..
ကျန်တဲ့ဥပဒေ..လုပ်ထုံးထားခိုင်းတာတွေကလည်း.. ဘက်ဂျက်လိုတာနဲ့မဆိုင်..။ ရတဲ့ဒဏ်ကြေးနဲ့ဘက်ဂျက်ရှာပေးနိုင်တာတွေပါခင်ဗျား..။
ဆြာတို့က.. တကယ်ဘက်ဂျက်လိုတဲ့.. ဖုံးတာဝါတိုင်တွေများများဆောက်မှ.. ဖုံးအရေအတွက်များများ လိုင်းကောင်းကောင်းမိ…
ရေကာတာတွေများများဆောက်မှ.. လျှပ်စစ်မီးကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့.. ကိစ္စမျိုးကျမမိ..
ဘက်ဂျက်မရှိလို့.. သူများနိုင်ငံကိုထိုးအပ်.. အမြတ်ပေးလုပ်ခိုင်းရတာမျီုးကျ.. ဆန္ဒပြ..။
ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းတာကြောင့် Taxi စီးရေ လိုအပ်တာထက် ပိုများနေ
အငှားယာဉ်အစီးရေ သိသိသာသာ များပြားလာခြင်းကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီး အခုလိုအငှားယာဉ်တွေ လိုအပ်ချက်ထက် ပိုမိုများပြားလာခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာ (၂၀၁၂)ခုနှစ်အတွင်းက အငှားယာဉ်အစီးရေ နှစ်သောင်းကျော်သာ ရှိခဲ့ရာကနေ ယခုနှစ်အတွင်းမှာ အစီးရေငါးသောင်းကျော် တိုးလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာ အငှားယာဉ်အစီးရေများပြားနေခြင်းနဲ့ ဆက်နေပြီး အနော်ရထာလမ်းမှာ နေထိုင်သူတစ်ဦးက ”အခုနေရာတိုင်းမှာ လမ်းတွေက အရမ်းပိတ်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အငှားယာဉ်တွေက ခရီးသည် တားလိုက်တာနဲ့ ရပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ ရပ်ပြီး လူတင်တယ်။ လူတွေသွားလာရေးအတွက် တက္ကစီတွေရှိဖို့ လိုတာမှန်ပေမယ့် စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့နဲ့ လိုအပ်တာထက် ပိုမနေဖို့ လိုတယ်လို့” သုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေအရ အငှားယာဉ်ကားအစီး (၂၀)စာ နေရာဟာ ဘတ်စ်ကားကြီး(၁)စီးစာနေရာနဲ့ ညီမျှနေပြီး တက်စီတစ်စီးကို မီနီဘတ်စ်တစ်စီးနှုန်း ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း မထသဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင်က ပြောပါတယ်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ အငှားယာဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအဝဝကို (၂၀၀၁)ခုနှစ်ကတည်းက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ချုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလ(၁)ရက်မှ စတင်ကာ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ခရီးသည်တင် ယာဉ်ဘတ်စ်ကားတွေ သာမက အငှားယာဉ်တွေကိုပါ ကြီးကြပ်စီစဉ်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လု့ိ သိရပါတယ်။ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ (၁၄)နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ထားရာမှ မထသအနေနဲ့ အငှားယာဉ်တွေကို ကြီးကြပ်စီစဉ်ဖို့အတွက် အခက်အခဲများ ရှိလာနိုင်ပြီး အရင်းဆုံးအနေနဲ့ အငှားယာဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ (data)တွေကို ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မထသအနေနဲ့ အငှားယာဉ်တွေကို ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကြီးကြပ်နိုင်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ လေးခရိုင်မှာ တက္ကစီအငှားယာဉ်များ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်မှုစနစ် လွယ်ကူစေဖို့အတွက် ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မထသဥက္ကဋ္ဌနဲ့ မထသဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါသည်။
ယူအက်စ်မြို့ကြီးတွေက.. တက်ခ်စီကို.. မြို့ထဲဆွဲမယ်ဆို.. တနှစ် ဒေါ်လာသိန်းချီတဲ့တက်ခ်စီလိုင်စင်ဝယ်ခိုင်းတာပဲ..။